Get Louder Volume on Sony Xperia Z / ZL / T / SP / V with Extra Volume Boost | IT Sharing Network
IT Sharing Network
မိတ်ဆွေများဖြစ်တဲ့ Internation Social Network Myanmar အမျိုးကောင်းသား လယ်တီမြေသား အောင်လေး(နည်းပညာဧရိယာ) Pyae Phyo (MMiTD) ဆော့ဝဲမြို့တော် MiTB ၀င်းထွဋ်တင် ကိုလတ်(ကျွဲဆင်း) (နည်းပညာ)ကိုချင်းလေး ၀င်းကမ္ဘာကျော် (နည်းပညာမှတ်တမ်း) မိုးကောင်းကင် ဖောင်းပြင် အိုင်တီမုဆိုး ဘလော့ခရီးသည် လွင်မင်းဗိုလ် မောင်ပေါက် Blogger KoYan Myanmar IT Helper သို့ ဆက်ရန်...
Get Louder Volume on Sony Xperia Z / ZL / T / SP / V with Extra Volume Boost
ရေးသားသူ Ko Ko Wynn ( ပြည် )
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ ခုပြန်လည်မျှဝေပေးမဲ့ နည်းလမ်းလေးကတော့ sony Xperia devices တွေဖြစ်တဲ့
Z / ZL/ T/ SP /V တို့ အသံပိုကျယ်လာအောင် လုပ်မဲ့နည်းလမ်းလေးပါ ။ဖုန်းထဲမှာ root file browser တစ်တစ်ခုကို အင်စတော လုပ်ပြီး backup ထားလိုက်ပါ မကြိုက်ရင် ပြန်သွင်းလို့ရအောင်လို့ပါ။ ယူရမဲ့နေရာကတော့ System/etc/snd_soc_msm folder နဲ့ “snd_soc_msm_2x_Fusion3″ ကို အ၇င်ဆုံး Backup ယူထားလိုက်ပါ။
For Xperia Phones on AOSP ROM
For Xperia Phones on Stock Based ROM:
မိမိဖုန်း firmware နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ zip ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး သွားရင်တော့ကလိဖို့စကြမယ်နော်
သက်ဆိုင်ရာ zip ဖိုင်ကိုဖုန်းထဲကိုထည့်ပါ။ ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပါ။ recovery (or) TWRP ကိုသွားပါ ။ install zip from sd ကနေ install လုပ်ပြီး ဖုန်းကို reboot ချပေးလိုက်ပါ ပြန်တတ်လာရင် volume hack တာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။
Andriod Root Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
နည်းပညာ၊ Software နှင့် နည်းပညာ စာအုပ်များ မျှဝေရာ....
Alpha Zawgyi Font For Windows
ရေးသားပြီး Post Title အားလုံး ကြည့်ရန်
မြန်မာလို PDF စာအုပ်များ ၁၀၄ အုပ်
မြန်မာလို PDF စာအုပ်များ ၁၀၄ အုပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... လိုချင်တဲ့စာအုပ်ကို တစ်ချက်ရှာကြည့်လိုက်ပါ...
မင်္ဂလာပါ... သန်းထိုက်(ရွေရိပ်) ရေးသားထားတဲ့ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူတိုင်းအတွက် မသိမဖြစ်နည်းပညာများ ဖြစ်တဲ့ (ကွန်ပျူတာနှင့် မကင်းသူများ၊ အိုင်...
Contacts Widget v4.1.6 Apk
ကိုယ့်ရဲ့ အခင်မင်ရဆုံးသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ contact တွေကို Widget အဖြစ်ပြန်လည်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ applaciton လေးပါ စမ်းသပ် အသုံးပြုလို့ရအောင် တင...
ZTE 8720,2766,2746,2736 ETC...MODEM ONE CLICK UNLOCKING
zte phone တော်တော်များများ moden unlock လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ ပြည်ပက၀ယ်လာတဲ့ဖုန်းတွေ ဖုန်းလိုင်းသုံးမရလို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ သူငယ...
Oracle VM VirtualBox ပေါ်မှာ BT5 သုံးနည်းနဲ့ wireless adapter မသိဘူးဆိုရင် (Wifi Password Hack နည်း)
Wifi Password Hack နည်း Oracle VM VirtualBox ပေါ်မှာ BT5 သုံးနည်းနဲ့ wireless adapter မသိဘူးဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် အဓိက ရည်ရွယ်...
CPE နဲ့ Wireless လွှင့်ကြမယ် ဖမ်းကြမယ်
CPE ရဲ့ အမျိုးအစားကတော့ TP Link (TL-WA5210G) CPE အမျိုးအစားပါ။ကျွန်တော်လည်း သိပ်မကျွမ်းကျင်ပါဘူး သူငယ်ချင်းတွေ မေးထားလို့ စမ်းပြီးတင...
Funny Photo Maker (19.7MB)
အလန်းလေးဗျ ပုံမှာပြထားသလိုပဲ မိမိရဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို အလွယ်တကူ funny ဒီဇိုင်းလေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ် ... အသုံးပြုပုံကလည်း ရိုးရှင်းလ...
Windows 8/8.1 မှာ .NET Framework 3.5 ကို Enable ပြုလုပ်ခြင်း
Windows 8/8.1 မှာ .NET Framework 4.5 အင်စတောလုပ်ပြီးသား ပါရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချို့Application တွေကို အင်စတောလုပ်ဖို့ အတွက် .NET F...
ဖုန်းထဲက English စာလုံး ​တွေကို သင့်​ဖုန်းကို Root လုပ်​ထားရုံဖြင့်​ ဒီဇိုင်းမျိုးစုံ ​ပြောင်းလဲ နိုင်​သည်​ အသုံးပြုပုံလွယ်​ကူ...
မိမိ Domain အား Blogspot ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်း
မိမိ Domain အား Blogspot ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်းဆိုရာတွင် မိမိရဲ့ blogspot.com က လိပ်စာ နဲ့ မိမိ ၀ယ်ယူထားတဲ့ Domain Name ကို ချိတ်ဆက...
Galaxy S4 Mini GT-I9195 CWM Recovery & Root
Moto X Leaked Camera App
The new Nexus72013 Edition (flo) bootloader unlo...
How to Download All Photos & Albums fromaFaceboo...
Windows 7/8/XP/Vista မှာ Website တွေကို ဆော့ဝဲလ်မသ...
Make Windows7Genuine – Fix “This copy of Windows...
How to Use Notepad in Google Chrome
Odin v3.09 Latest Version
Xperia Tablet S Style Keyboard on Your Android Dev...
Galaxy Note 8.0 WiFi GT-N5110 Android 4.2.2 Leaked...
Don't Sleep (for window)
Get Louder Volume on Sony Xperia Z / ZL / T / SP /...
Android Device from PC with Mobogenie All-in-One A...
HTC One (M7) and Install ClockworkMod/TWRP Recover...
Photosphere HD Live Wallpaper
Search Everything (For PC)
ArcSoft ShowBiz 5.0.1.480
Panda Internet Security 2013 18.01.01 Final
CCleaner 4.04.4197 Professional & Business Edition...
Facebook အသုံးပြုနည်း သရုပ်ပြပုံများနှင့် တဆင့်ခြင...
Windows / IOS မှာလဲ Google Chromebook ကိုသုံးနည်း
Windows7Repairing Guide ( မြန်မာလို )
Internet Download Manager 6.17 Build3Final
Accent RAR Password Recovery 2.01 Build 2241
AVG Internet Security 2014 build 4016 [x86 - x64] ...
ကွန်ပျူတာ အခြေခံနှင့် Wondows7အသုံးပြုနည်း (မြန်...
Windows7အသုံးပြုနည်း လက်စွဲ (ဦးအောင်လင်း)
Samsung GALAXY GRAND Duos GT – I9082 ကို Zawgyi ပါ...
Laptop ထဲက Data တွေကို wifi ကနေပြီး ဖုန်းပေါ်ကနေကြည...
How to Increase Speaker Volume on Your Rooted Sams...
Phone နဲ့ Tablet တော်တော်များများကို Root လုပ်နိုင...
Root and Install CWM on Galaxy Mega 5.8 GT-I9152, ...
► 2012 (1263)
Adobe Reader X
Advanced SystemCare with Antivirus
Andriod နှင့် ဆိုင်သောစာအုပ်
Anti Virus Key
AutoCAD နှင့်ဆိုင်သော စာအုပ်
Avira System Speedup
Barcamp Pyay 2012
Blog နှင့်ဆိုင်သော စာအုပ်
command key နှင့်ဆိုင်သော စာအုပ်
CSS နှင့်ဆိုင်သော စာအုပ်
disk နှင့် ပတ်သက်သမျှ
Excel နှင့်ဆိုင်သော စာအုပ်
Facebook နှင့်ဆိုင်သော စာအုပ်
Floder - File Lock
Gtalk နှင့်ဆိုင်သော စာအုပ်
Hacking နှင့်ဆိုင်သော စာအုပ်
JAVA နှင့်ဆိုင်သော စာအုပ်
Microsoft Office စာအုပ်
Network နှင့်ဆိုင်သော စာအုပ်
PC နှင့် ဆိုင်သော စာအုပ်
Photoshpo နှင့်ဆိုင်သော စာအုပ်
PHP နှင့်ဆိုင်သော စာအုပ်
Power Point နှင့်ဆိုင်သောစာအုပ်
Programming နှင့်ဆိုင်သော စာအုပ်
Ready Boost ပြုလုပ်ပုံ
Skype နှင့်ဆိုင်သော စာအုပ်
Team Viewer အသုံးပြုနည်းစာအုပ်
Ubuntu နှင့်ဆိုင်သော စာအုပ်
USB Disk Security
USB မှ Windows တင်နည်း
Video Editing စာအုပ်
Virus နှင့်ဆိုင်သော စာအုပ်
VM Ware + Virtual Box
Window7Backup လုပ်နည်း
Windows ISO Download
Windows Registry နှင့်ဆိုင်သော
အင်တာနက်သုံး လိပ်စာများ စာအုပ်